Home Wararka Shirkadaha waxsoo dajiya Muqdisho oo yareeyay badeecadihii ay keeni jireen
Shirkadaha waxsoo dajiya Muqdisho oo yareeyay badeecadihii ay keeni jireen
Suuq yada muqdisho oo laga dareemayo sara ukac maciisha & qalabka dhismaha kadib markii ganacsatada ay walwal ka muujiyeen xalada daganaasho la’aanta ka jirta dalka ayagoo cabsi ka qaba in lagu boobo dagaalada la filaayo ineey muqdisho kadhacaan.
Dadka reer Muqdisho ayaa wajahayaa ciriiri nololeed oo ay galisay dowlada uu waqtigeeda gabaabsiga yahay mana jirto wax dhaqdhaqaaq hormar ah oo laga dareemayo bisha hada an ku jirno ee January .
Dhismayaashi qabyada ahaa ayaa iyana lajoojiyay in la dhameestiro maadama ay dadka reer muqdisho ka baqayaan in guriyahooda ku burburi doonaan dagaalada lafilaayo ineey dhacaan .
MW Farmaajo wuxuu dhaawac wayn u geestay midnimada shacabka mana fududaan doonto in markale Muqdisho ay sii ahaato caasimad umad somaaliyeed hadii xal loowaayo kacsanaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta.
lasoco wixii warar ah ee kuso kordha Muqdisho